विबाहको तयारी रहेकी रेखा थापालाई विप्लवले भेटे सुटुक्क, के विबाहको बधाई दिन गएका हुन् ? के के भयो कुराकानी ? – Gazabkonews
विबाहको तयारी रहेकी रेखा थापालाई विप्लवले भेटे सुटुक्क, के विबाहको बधाई दिन गएका हुन् ? के के भयो कुराकानी ?
नेकपा महासचिव नेत्रबिक्रम चन्द “विप्लव” र नेपाली चलचित्र जगतकी लोकप्रिय नायिका रेखा थापाबीच भेटघाट भएको छ ।सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथी प्रतिबन्ध लगाएपछी रेखाले सरकारी कदमको विरोध गर्दै विप्लवको पक्षमा अभिव्यक्ती दिदै आएकी थिइन । उनले पटक पटक आफु विप्लवको समर्थनमा रहने बताउँदै आएको थिइन् । केही समय अगाडी एपीवान टेलिभिजनको ‘रजतपट’ कार्यक्रमको धर्मसंकटमा उनलाई देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लवमध्ये एउटा छान्न लगाइएको थियो । उनले धेरै बेर सोचेर विप्लव जस्तो युवा नेतृत्व राजनीतिमा आउनु पर्छ भनेर खुलेर प्रशंशा गरेकी थिइन् ।
संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्तिसँग डिभोर्स गरेर म्याकेन्जीले शिक्षकसँग बिहे गरिन् : संसारका सबैभन्दा धनी व्यक्ति जेफ बेजोससँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी म्याकेन्जी स्कटले एक शिक्षकसँग विवाह गरेकी छिन् । जेफ बेजोस र म्याकेन्जीको २०१९ मा सम्बन्धविच्छेद भएको थियो । बेजोससँग सम्बन्धविच्छेदपछि म्याकेन्जीले क्षतिपूर्तिको रुपमा ३८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सम्पत्ति पाएकी थिइन् । म्याकेन्जी एक लेखिका र समाजसेवी हुन् । न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार उनले अमेरिकाको सिएटलमा बस्ने विज्ञान शिक्षक ड्यान जेवेटसँग बिहे गरेकी हुन् । यी दुवैलाई परोपकारी काममा रुची छ र उनीहरुले साथमा परोपकारका लागि राम्रो रकम दान गर्ने तयारी गरेका छन् । जेफ बेजोस म्याकेन्जीसँग सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा बाँडेपछि पनि अझै संसारका सबैभन्दा धनी छन् । उनको सम्पत्ति १७६.६ बिलियन डलर छ ।
बिहेपछि ड्यानले आफूले आम मानिसको जीवनमा परिवर्तन आउने गरी जीवनमा यति ठूलो रकम दान गर्न पाउँछु भन्ने कहिल्यै कल्पना नगरेको बताएका छन् । ड्यान कैयौं दशकदेखि शिक्षक छन् र उनी अहिलेसम्म पनि त्यउही लेकसाइड स्कुलमा पढाउँछन् जहाँ म्याकेन्जीका छोराछोरीले पढेका थिए । म्याकेन्जीले गएको जुलाइमा कोरोनाबाट प्रभावित मानिसहरुको सहयोगको लागि ११६ समाजसेवी संस्थाहरुलाई १.६८ अर्ब डलर रकम दान गरेकी थिइन् ।
म्याकेन्जी अमेरिकामा सबैभन्दा दान गर्ने व्यक्तिहरुमध्ये दोस्रो स्थानमा छिन् । पहिलो स्थानमा उनका पूर्वपति जेफ बेजोस नै छन् । उनले १० अर्ब डलर दान गरेर बेजोस अर्थ फण्ड बनाइसकेका छन् । २०१९ मा बेजोस र म्याकेन्जीको सम्बनधविच्छेदको प्रक्रिया पूरा भएको थियो । बेजोससँग छुट्टिएपछि म्याकेन्जी विश्वकी चौथो धनी महिला बनेकी थिइन् । यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो डिभोर्स सेटलमेन्ट थियो । बेजोस र म्याकेन्जीको बिहे १९९३ मा भएको थियो । यसको एक वर्षपछि बेजोसले आफ्नो ग्यारेजबाट अमेजन कम्पनी सुरुवात गरेका थिए ।